R/wasaaraha Somaliya oo Addis Ababa ay Casho ugu Sameeyeen Masuuliyiin Somali ah. – Rasaasa News
Ra,iisal wasaaraha Somaliya mudane Cabdiwali Maxamed Cali, ayay casho sharaf ugu sameeyeen Hotel Ghion, madax Somali ah oo ka tirsan dawlada Federalka Ethiopia, dawlada degaanka iyo Ganacsato.
Waa markii ugu horeysay ee ay Ethiopia saxaafad si aan qarsoodi ahayn u hor dhigto masuuliyiin Somalida Ethiopia ah iyaga oo soo dhaweeynaya wafti ka socda dawlad Somaliya.
Casho sharafta Ra,iisul wasaaraha loo sameeyey waxaa kala qayb galay masuuliyiinta Somalida Ethiopia oo isugu jira heer federal iyo heer degaan waxaana ka mid ahaa; Madaxweynaha dawlada degaanka Somalida Cabdi Maxamuud Cumar, Wasiirka ganacsiga Cabdiraxmaan Gurey, wasiiru dawlaha maaliyada, wasiiru dalaha arimaha bulshada iyo wasiiru dawlaha dalxiiska, Safiiro, xildhibaano iyo ganacsato.
Dawlada federalka ee Ethiopia ayaa tan iyo intii ay qabatay hogaanka dalka Ethiopia waxay aqoonsatay in Somalida Ethiopia ay in badan ku hoos dulmanayd talisyadii Ethiopia ka jiri jiray. Waxayna dawladu aqoonsatay in dhibaatada takoorka ah ee lagu hayo Somalida Ethiopia ay hurinayso nabad la,aanta Geeska Afrika.
Somali Ethiopia waxay degan yihiin dhulka 2aad ee ugu baaxada weyn qoomiyadaha Ethiopia, tiro ahaana waxay in yar ka yar yihiin Somalida ku nool dalka Somaliya, qancinta Somalida Ethiopia, waxay meesha ka saari kartaa khilaafka iyo dhibaatada ka dhamaan la,a geeska Afrika.
Soo dhawaynta Ra,iisal wasaaraha Somaliya ay u fidiyeen masuuliyiinta Somalida Ethiopia, waxay wax wayn ka badali doontaa aragtidii ay masuuliyiinta Somalidu ka qabeen dalka Ethiopia.
Waxayna fariin u tahay ku xigeenka ra,iisal wasaaraha dalka Somaliya oo isagu ka mid ah masuuliyiinta Somalida ah ee xasaasiyada ka qaba dalka Ethiopia.
Ra’iisul wasaaraha Somaliya ayaa ka mahad celiyey cashada ay u sameeyeen Somalida Ethiopia, waxaana uu kaftan ku yidhi waligay ma aanan moodaynin in Ethiopia ay joogaan dad Somali ah oo muuqda, maantase waxaan arkay waa wax iga qarsoonaa.
Bishaaro: ESTV oo Hawada Soo Galay